04 | March | 2013 | Danya Wadi
Rohingya Vision Daily News ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကား ဖြင့်သတင်းနားထောင်နိုင်ပြီ
By danyawadi March 4, 2013 1 Comment
Rvision Daily News အောက်တွင်ပေးထားသောလင့်ကိုနှိပ်၍ သတင်းနားထောင် နိုင်ပါသည်။ Website: http://www.rvisiontv.com/ RVision TV Covers Rohingya News, Culture, Documentary, Religious, Educational and Empowerment Programs Website: http://www.rvisiontv.com/ DailyMotion: http://www.dailymotion.com/RohingyaVi&#8230; Youtube: http://www.youtube.com/user/RohingyaV&#8230; Advertisements
ကျောက်တော်မှဘူးသီးတောင်သို့ခိုလှုံ လာခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များကိုထောင် ဒဏ်ချမှတ် …
ကျောက်တော်မှဘူးသီးတောင်သို့ခိုလှုံလာခဲ့သောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ် မာတလိ RB News 4.3.2013 ဘူးသီးတောင် ။ ။ ဇန်န၀ါရီလ ဆန်းပိုင်းတွင် ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်လာသော ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၁၅ ဦးကို နယ်မြေကျော်လွန်မှုဖြင့် တရားစွဲဆို၍ ဖေဖော်ဝါရီ လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တရားရုံးမှ မတရားသဖြင့် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီ ချမှတ် လိုက် ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ “ဇန်န၀ါရီလ (၂) ရက်နေ့က ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝ ကျွန်းကနေ ရခိုင်အစွန်း ရောက်တွေနဲ့ ဖက် ဆစ် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ၀ိုင်းရံပိတ်ဆို့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့လို့ စိုင်းတင်တောင် တန်း တွေကို သက်စွန့်ဆံဖျားဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာလာရောက် ခိုလှုံတာပါ။ လူကြီး […]
By danyawadi March 4, 2013 Leaveacomment
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုအဆုံးသတ်ရေးအဖွဲ့မှအမေရိကန်၏မူဝါဒပြောင်းလဲရန်တောင်းဆို RB News 1.3.2013 ယမန်နေ့က အမေရိကန် ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်တွင် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မီတီ မှ မြန်မာ့အရေးကြားနာ မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကြားနာပွဲတွင် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု အဆုံးသတ် ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ Tom Andrews မှ အမေရိကန် အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒအားပြောင်းလဲရန် တောင်းဆို လိုက်ပါသည်။ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု အဆုံးသတ်ရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် မှ မေးမြန်း ခဲ့ သည်။ မေးမြန်းချက်အပြည့်အစုံမှာ – “ဒီလို ပြောဆိုခဲ့တာဟာ ဘယ်လို အထောက်အထား တွေနဲ့ပြောဆိုတာလဲလို့ Tom Andrews ကို ဆက် သွယ် မေးမြန်းရာမှာတော့ If […]
သန်းခေါင်ကျော်ခဲ့ပြီ ၊ ဌေးလွင်ဦး
RB News 1.3.2013 အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း လက်မခံနိုင်သူများ- ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာနေသူများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှောင်ခေတ်မှာ အကုသိုလ်ကျူးလွန်မှု၊ မတရားမှု၊ ရာဇ၀တ်မှုများကို ကလိမ်ကကျစ်ကောင်များ က တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်နိုင်ခွင့် ရှိ ပေမယ့်-၊ ရှင်းလင်းထင်ရှားလာတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ-၊ ထိုထိုသော မအပ်မရာသည့် အမှုများအား ကျူးလွန်သူများ ကို ကမ္ဘာကြီးက ရာဇ၀တ်ကောင်များလို့ သတ်မှတ်ပြီး-၊ အများသူငါက အမှန်တရားကို သိနေပါလျှက် ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့် လိမ်ညာနေသူများကို ကျပ်မပြည့်သူများလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပိတ်ပင်တားဆီးလို့ မရတဲ့ မီဒီယာများအောက်က ခေတ်သစ်ကမ္ဘာထဲကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ရောက် လာနေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့မျက်လုံးများရဲ့ အောက် မှာ ခေတ်နောက် ကျသွားပြီ ဖြစ် တဲ့ မျက်ကန်းအမျိုးသားရေးဝါဒ ကို ဖက်တွယ်ထားသူများရဲ့ ဘ၀က- […]
JEDDAH: P.K. Abdul Ghafour Monday4March 2013 Last Update3March 2013 11:35 pm The Labor Ministry yesterday announced concessions for the Burmese community living in the Kingdom, saying four Burmese workers would be considered one expat under the Nitaqat system. The ministry is also consideringanew law that would enforce compulsory retirement […]
လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာ ဆရာတော်ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့သူများ ဖမ်းဆီးခံရ
Thit Htoo Lwin blog‘s photo. လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာ ဆရာတော်ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့သူများ ဖမ်းဆီးခံရ 2013-03-03 ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာက လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ ရွာသားတချို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း လိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မြင်းခြံထောင်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ဆရာတော် ဦးကောသလ ကို ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၆ ) ရက်နေ့က ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့ကြ တဲ့ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာက ရွာသား (၉) ဦး ထဲက (၄) ဦးကို ရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ အခုအချိန်ထိ သူတို့ကို မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့် မပေးကြောင်း ရွာကျောင်း […]
စာရေးသူ ရဲရင့်သစ္စာ ရေးသားပြုစုသော “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်” စာအုပ် ထွက်ရှိ M-Media စာအုပ်စင်, ပြည်တွင်း သတင်း မတ်လ ၄ ၊ ၂၀၁၃ M-Media အေးမောင် စာရေးသူ ရဲရင့်သစ္စာ ရေးသားပြုစုသော “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်” စာအုပ်အား ယနေ့ မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှစ၍ ဖြန့်ချီနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ အဆိုပါစာအုပ်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း၌ ရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့သည့် “ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျား နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်” အမည်ရသည့် စာအုပ်၌ ပါရှိသော အစ္စလာမ် သာသနာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သမိုင်းအမှားများကို ပြန်လည် ဖြေရှင်းရေးသားထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျားနှင့် သမိုင်းရှုထောင့်“ အမည်ရှိစာအုပ်ကို ဘဒ္ဒန္တ ကောသလ္လ (စံပြ ၊ […]